Ukunakekelwa kokutshala kwepelepele | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukunakekelwa kokutshala kwepelepele
Indlela yokulondoloza u-freshs of parsley ebusika, zokupheka zokuvuna ama-herbs okubabayo
I-parsley ingavunwa sonke isizini, inqamule njengoba kudingeka, kanti isitshalo esikhula ensimini sihlala siluhlaza futhi sinamafutha kuze kube sekwindla. Ukuvuna kwe-Parsley: Ukuvuna Izinhlobo eziningi ze-parsley zilungele ukuvuna izinyanga ezimbili kuya kwezintathu ngemuva kokutshala. Lapho kuvuna ebusika, kufanele kuqashelwe ukuthi ama-sprigs amancane ka-parsley ayinandi elimnandi kakhulu, ngakho-ke kungcono ukuqoqa iparsley yokuqala.
Okudingayo ukwazi nge-pepper ekhulayo
I-pepper elimnandi yisitshalo esithandwa kakhulu phakathi kwabalimi bemifino. Futhi lokhu kuchazwe abaningi. Iqukethe amavithamini amaningi namaminerali amaningi, inani lawo elidlula utamatisi nama-eggplant, futhi alinalo okulinganayo kokuqukethwe kwe-ascorbic acid. I-Pepper izohlobisa noma yikuphi isidlo etafuleni lakho leholide, lizokunika ukunambitheka okucwengileko nephunga elimnandi.
Indlela yokutshala le pepper ngemuva kokutshala emhlabathini ovulekile
Abalimi abaningi bakhula pepper enhle esakhiweni sabo. Ukuhlwanyelwa kwezithombo zemifino ewusizo kwenzeka ngenkathi eshisayo ngakho-ke kudinga ukunakekelwa ngokucophelela. Njengoba usinikeze le pepper ngokunisela okudingekayo nokudla okunomsoco, ungaqiniseka ngokuvunwa okuhle. Izici zokucubungula i-Pepper. Ukutshala i-pepper endle kuqala ngokuqoqa imbewu.
Izindlela zokupheka ezinhle zokuvuna ama-apula ebusika
Yiziphi izinambuzane ezibhekwa njengezinambuzane zasemasimini nezingadi
Ungayoma kanjani izaqathe kuhhavini, ugcine amavithamini alo?
Ekuqaleni eSiberia: incazelo nesithombe samatamatisi Koenigsberg
UGeicher - ubuhle bezintaba ngamahlamvu wangempela
I-Egg Breed ne-Unusual Color - Ancona
Isilunga esiyimpunga i-rodent engathandeki futhi eyingozi!
Imithetho eyisisekelo yezithombo ezikhulayo ze-pepper: ukuthi ungagcwalisa kanjani imbewu ngaphambi kokutshala